China Bridge Style Bambu Kitchen Accessories Fitaovana fitahirizana lakozia Drawer mpikarakara for Utensils - Orinasa miloko mainty 5 miloko | Bridge Style
Bridge Style Bamboo Kitchen Accessories Cutlery fitahirizana lakozia Drawer mpikarakara ho an'ny fitaovana - Loko mainty 5 Slot
Fanampiny tena ilaina amin'ny tranonao:Ny mpikarakara lovia an-dakozia Bridge Style Bambu dia noforonina tamin'ny Bamboo. Ny fantsom-boaloboka dia mampiseho endrika mahira-tsaina hanampy anao handamina ireo kojakoja, kojakoja ao an-dakozia, kosmetika ary fitaovam-pitaterana araka ny itiavanao azy. Manana kompartitra 5 ny mpikarakara, hahafahanao mametraka zavatra mifanaraka amin'izay tsy misy korontana. Ny mpikarakara fantsom-bozaka dia mety amin'ny mpantsaka miavaka amin'ny refy. Izy io dia mpikarakara drawer Bambu tonga lafatra anananao ao an-tranonao. Tena manampy tokoa izy io amin'ny fitazonana ny fitaovan'ny lakozia, ny fitaovana fanoratana ary ny kosmetika voalamina, madio sy milamina.
Space mahomby:Ny mpikarakara ny fantsom-boaloboka dia vahaolana mety indrindra ho an'ireo mpantsaka an-trano na any amin'ny toeram-piasana. Ny mpikarakara Bambu mamonjy habakabaka tonga lafatra dia manampy anao hahatratra ilay zavatra tadiavinao tadiavinao. Na mitady antsy tianao na sotro ianao, ity mpandamina lozabe tonga lafatra ity dia mahatonga azy ho tsotra sy mora tanteraka.
Haben'ny tonga lafatra:Ny vilia fantsom-bozaka 5 dia mirefy 13.8 "x9.9" x2.36 ", efamira mahitsizoro amin'ny habe isan-karazany izay hotehirizina tanteraka amin'ny fomba isan-karazany mba hampitomboana ny habakao.
Volokano avo lenta:Vita avy amin'ny volotsangana 100% momba ny tontolo iainana, ny famolavolana sary hosodoko miloko mainty dia tsy vitan'ny fampiharana fotsiny fa koa haingon-trano tsara tarehy ho an'ny tranonao. Izany dia ho fanomezana vaovao manafana trano.
Teo aloha: Bridge Style Bambu Cutlery Tray Kitchen Utensil Silverware Flatware Drawer Organizer Dividers miaraka amin'ny 5 Compartment- Brown Color
Manaraka: Mpanjifa mpitaingina lakozia ao anaty lakozia, boatin-tanety vita amin'ny volotsangana ho an'ny vatasarihana, mpikarakara fikolokoloana, mpihazona fisaka vita amin'ny takelaka, mpanelanelana amin'ny birao birao fikarakarana birao, vatasarihana antsy.
Sary mitifitra amazona maimaim-poana
Tolo-kevitra mpandefa mora indrindra
Mpanampy vaovao farany mpivarotra vaovao
Lany fihenam-bidy lehibe amin'ny China Classics Bamboo Drawer Di ...
Ny kalitaon'ny birao an-trano ambony kalitao any China ...
Volavola manokana ho an'ny boaty fitehirizam-bolo any China Und ...
Bridge Style Bambu Manamboatra Banana Tea Stor ...